Translate Khmer to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Khmer to Myanmar (Burmese), Khmer to Myanmar (Burmese) translations, Khmer to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
សួស្តី​តើ​អ្នក​សុខ​សប្បាយ​ទេ မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
សួរ​ស្ដី​ឈ្មោះ​របស់ខ្ញុំ​គឺ မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
ខ្ញុំសុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀបការ ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
តើអ្វីទៅជាពេលឥឡូវនេះ? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
តើខ្ញុំអាចខ្ចីឆនទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានទេ? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
បង្គាប់ឱ្យខ្ញុំផឹកទេ? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
ខ្ញុំមានអាឡែស៊ីជាមួយជាតិស្ករ ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
សូមទូរស័ព្ទមកខ្ញុំជាមេរបស់អ្នក។ ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။